Rajadii Warlord Gaandi ee Jubbooyinka oo Hoos u dhacday (Warbixinta Keydmedia) | KEYDMEDIA ONLINE
Rajadii Warlord Gaandi ee Jubbooyinka oo Hoos u dhacday (Warbixinta Keydmedia)
Kismaayo (Keydmedia) - Dagaal-ooge Gaandi ujeedadiisa markii horeba waxaa ay ahayd dowladdo iyo Shirkado ajanabi ah uu dalka ku soo hogaamiyo kuwaasoo uu qandaraas ku soo qaatay.
Dagar-qabe Gaandi waxaa uu mudo dhan Labo sano iyo bar uu u ololeenaayay sidii ciidamada Kenyaanka ah ee hadda dhibaatada ku haya dalka iyo dadka Soomaaliyeed uu u soo hogaamin lahaa, ayadoona ay taasi u hiorgashay hadana waxaa hoos u dhacay hankii iyo Rajadii Dagaal-ooge Gaandi ee uu ku doonayay sidii Maamul ku sheega Azaniya ee lagu soo dhoo dhoobay Kenya loo geyn lahaa magaalada Kismaayo iyo guud ahaan gobbolada Jubbooyinka.
Ciidamada Gaandi ee ku suggan deegaano kamid ah Gobbolka Jubbada Hoose ayaa rajo xumo aad u daran ka muujiyay sidii ay horay ugu sii socon lahaayeen, iyagoona sheegay inaysan fududeen sidii ay Shabaab Gobboladaasi ugu fara maroojin lahaayeen.
Sargaal ka tirsan Ciidamada Gaandi oo Degmada Dhoobley ku suggan ayaa Keydmedia u sheegay in haatan ay dhamaatay hankii iyo rajadii ay ka qabeen sidii ay horay ugu sii socon lahaayeen, isagoona intaasi ku daray in Ciidamada qaarkood ay hada bilaabeen inay dhuumanayaan furumaha dagaalka.
Dagaal-ooge Gaandi waxaa uu sidoo kale heshiis la soo galay oo uu qandaraas ku soo qaatay Shirkado laga leeyahay dalka Norwey oo iyagu hada howlo shidaal baaris iyo qodis ah ka wada deegaanada Jaziirada Koonfureed ee Gobbolka Jubbada Hoose gaar ahana Buurgaabo iyo Laamo.